Egwu Afọ 60
Ihe kacha mma na-enweghị okwu nke afọ iri abụọ nke nkume
Ihe kasị mma 60s ngwá egwú rock bụ nnukwu akpa, dị ka nnukwu R & B, jazz, na jump jump nke 50s weere na-ewere ọtụtụ nza egwú ndị na -adịghị American. Nkà na ụzụ na-ebutekwa isi ya, n'ezie, na-akpata ụda akụkụ, ụda ọkụ, na ọta nke na-enweta nastier dịka omenala pop. Nke a bụ ihe ndị na-akụda ụda nke ọdịda nke afọ 1960, abụ ndị na-akọwa mkpụrụ obi, isi mmiri, na ihe ndị ọzọ.
Ọ dịghị mgbe ọ na - eme Top 40 mgbe a tọhapụrụ ya, mana nsụgharị nke ụkpụrụ Grik nke si na Twenties emeela ka ọ bụrụ ihe a ma ama, na n'oge nke ya, ọ bụ naanị ihe ọ bụla sọọsọ na ngwá ọrụ kpuchiri ya. Nke pụtara na Dale na-enweta akwụmụgwọ n'ihi na ọ fọrọ nke nta ka ọ mara tupu ya emepụta ya. Mgbe otu onye na-ege ntị na-agwa ya na ọ pụghị ịfụgharị otu eriri, Dale, onye sitere na Lebanọn, chetara otu nna nna ya kụziiri ya - ọdịdị nke ọdịbendị Gris, nke egwu Middle Eastern na-emetụta, nke na ọ nwere ike igwu egwu na otu eriri nke oud. Dick kwadoro ya na ọsọ ọsọ ya, ndị ọzọ bụ akụkọ ihe mere eme. Mgbe enyi nke onye nduzi Quentin Tarantino kwadoro iji ya mee ihe na fim ya, Pulp Fiction, e kere abụ ahụ maka anwụghị anwụ.
Steve Cropper na "Duck" Dunn nke Booker T. na ndị MG, ndị òtù ụlọ maka Memphis 'akụkọ Stax , bụ ndị na-eme ihe nkiri, amalarịrị ịkwụ ụgwọ nke afọ tupu oge a tupu mgbe ahụ, na Mar-Keys, ha meriri egwu mbụ ha na Egwurugwu na-esochi "Abụ ikpeazụ." N'adịghị ka abụ ahụ, "Green Onions" enweghị ụzụ olu "Tequila", mana ihe o mere bụ Booker T. Jones 'nkà dị ịtụnanya na Hammond Organ na Cropper na-eduga na guitar . Eji amamihe mara aha mgbe "nri mkpụrụ obi" dị nro, ọ bụ nke Southern sass na jazzy oyi, na -emepụta àgwà na ọnọdụ dị ịtụnanya n'usoro nhazi dị mfe na ụfọdụ ụkpụrụ na-emeghe ọnụ ọchị; eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ndị na-eche na utu aha ahụ bụ ịkọ wii wii, ọ bụghị isi nri, nwere ike ikwu ọtụtụ ihe.
Ngwá ọrụ nke abụọ iji gbasie agbatị jazz-pop "Nzuzo, Dịka na Ọbịbịa Ụtụtụ," "Walk, Do not Run" dị iche na "Sleepwalk" na Santo na Johnny n'ihi na ọ na-ewe ọtụtụ nnwere onwe na ụda. Dị ka a na-emekarị, Nzụpụta ahụ na-agbanye ya kpamkpam na kọntaktị ochie (na-agbazinye ihe ngwa ngwa site n'aka Johnny Smith na 1954), gbasaa ya ruo na-agba ọsọ-ọsọ ọsọ, ma hapụ obere igodo na, ịmepụta enigmatic mana ọ ka na-egwu obere ọnụ. Ọ bụ ezie na Dick Dale na-akpọ "Ka anyị na-aga Trippin '" n'ihu ọha na 1958, Ventures kụrụ ya aka na ụlọ ọrụ ahụ, na-ede akara a dịka nchịkọta akwụkwọ nke nbudata egwu egwu; ọ bụ ihe a na-ewu ewu ọ kụrụ chaatị ahụ ọzọ afọ anọ mgbe e mesịrị na mbipute emelitere ma chọta ndụ ọhụrụ na medley na-enweghị atụ na "Sleigh Ride"!
Ọ bụghị ọtụtụ ndị na-achọpụta na mkparịta ụka Bar-Kays 'buru ibu bụ n'ezie isi ihe nkiri James Bond (ma ọ bụghị aha aha) "Goldfinger." Nke ahụ bụ otu n'ihi na ọ malitere na studio dịka mbipute JJ Jackson si "Ma Ọ dị mma "- ya bụ, ruo mgbe mpaghara mpi ahụ batara wee kpochapụ ihe niile pụọ na riff ahụ. Ọ bụ Isaac Hayes na David Porter, Stax si agbawa ndị na-ede egwú na ndị na-emepụta ihe, bụ ndị tụrụ aro na ha na-eji aha parody. Ntak emi ọbọn̄ emi ọtọn̄ọde ke "Mary Had a Little Lamb," Otú ọ dị, ọ bụ onye ọ bụla na-eche, ọ gwụla ma ha na-akpọghachi azụ na njedebe a ma ama nke Stevie Wonder's "Fingertips, Pt. 2. "O doro anya na ọ dị mma.
Ọtụtụ ndị na-egwu egwu ndị agha na-abụ nanị ụda, ọ bụghị na-asọgharị onwe ha, mana Chantays si Santa Ana maara n'ezie egwuregwu ahụ ma kpọọ aha a mgbe nnukwu ibu na egwu dị na Hawaii mara dịka Banzai Pipeline. Otú ọ dị, ha rụrụ ọtụtụ ọrụ na ụda n'onwe ya: mkpebi ha ịgwakọta bass na guitars n'elu ugbo, dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, na obere bassline, nke ụdị a na-ahụkarị na egwu ụlọ . Uzo ohuru abuo ga - abuta ihe kachasi ike n'olu na ugbua nke ubochi. Ma, nke a na-ahụ maka oge ahụ, ọ na-anọ dị ka b-n'akụkụ ruo mgbe DJ na-achọpụta na e nwere ọlaedo na ntụgharị.
A na-ede njikọ kpọmkwem n'etiti R & B nke Ndị Fifties na mgbawa egwu nke mbubreyo '60s,' Cissy Strut 'mgbe mịsịrị ụda egwú Leo Nocentelli gwụsịrị ike igosi ihe ngosi nke band ahụ na ihe ọzọ na-ewu ewu, Bill Doggett nwere "jide ya." Egwuru egwu a na-eji ụbọchi nke itoolu eme ihe ugbu a na egwu egwu, ma Ziggy Modeliste na-egwu egwu na-etinye aka na ya na New Orleans na-eti aka, ma ọ bụghị nanị na NOLA na-eme ka ha nwee ike iji nwayọọ nwayọọ na-eme ka ụbọchị ahụ dị elu. Ozugbo James Brown "Funky Drummer" a na-egwuri egwu na njedebe '80s, dj-hip DJ DJ malitere ịmepụta abụ a, nke nwere ọbụna mgbochi ọgụ.
Ịgbakwunyekwuo ụka! South Jazz trumpeter Masekela na-etinye ya ka o jiri ya mee ihe n 'okpukpu a, nke na-egosi na Hugh dị na Zambian. Odeghi nke 5. "Echeghịdị ka e dekọrọ ya na mbụ, mana album ọhụrụ nke Masekela nọ na-agba ọsọ ọsọ, ya mere ọ bụ nke a na-emegharị, ya na onye na-abụ abụ Philemon Hou na-ede abụ abụ ọhụrụ maka Hugh n'ebe ahụ n'oge nnọkọ . Ihe a na-ewu ewu bụ nọmba a na ìgwè enyi nke Distinction edere ya okwu na ya ma mee ka ọ bụrụ ihe niile, ma ekwela ka a ghọgbuo ya - nke a bụ ihe mbụ. (Guitarist Bruce Langhorne, onye amarakwa na ọ na-akpọ Turkish "frame drum," bụ isiokwu banyere "Mr. Tambourine Man" nke Dylan. Ọ dịghị onye ọ bụla maara onye na-egwu egwu ahụ.)
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ejighị ihe ọ bụla na-emekarị - aha mbụ bụ "Switchblade," nke ga-abụrịrị na o merụrụ airplay - mana ọmarịcha abụ a na-egwu egwu jikọtara mmụọ nke ihe kacha mma '50s drum instrumentals na nke kachasị ọhụrụ instro ụdị nwoke, ọ bụghị ịkpọtụrụ onye njikwa ha. Hahahahahaha! Hichapụ. Edere ya na nkeji iri na ise iji mejupụta akụkụ b n'akụkụ, ọ na-ewepụsịa kọlụm ndị dị n'akụkụ ahụ ma gbakwunye ụda agbụrụ dị iche iche site na Ron Wilson (n'ezie ọ bụ agadi nke si na ụlọ ọrụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị). Ekele maka ụfọdụ ndị na-egwu DJ, nke a knockoff ghọrọ ụdị ihe ịtụnanya nke na-akwụ ụgwọ ndị ahụ ruo mgbe ebighị ebi.
Otu n'ime ọtụtụ jazz-trio makeovers na-adabere na piano iji tụọ chaatị ndị ahụ n'oge Sixties, mgbanwe a dị egwu nke Dobie Gray nke ọzọ nnukwu kụrụ n'ezie weghaara na abalị na-eche nke a smoky jazz club. Kedu nke bụ ebe e dekọrọ ya - Ụlọ nke Bohemian DC DC, ka ọ bụrụ kpọmkwem. N'ezie, otu n'ime ihe kachasị mma banyere abụ bụ otú ìgwè mmadụ si arụ ọrụ ahụ; ihe mkpuchi ya gosipụtara na ọ dịkarịrị ala karịa oge mbụ. Lewis bụ ihe na-adịgide adịgide n'elu ihe odide album maka afọ iri abụọ, na-etinye akwụkwọ ntinye aka ya na ihe ọkpụkpọ Bach, bossa nova, na Beatles.
Ụdị ihe ndekọ kachasị mma, ya bụ, ụdị anụ ahụ. N'ụzọ ụfọdụ n'ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi na "Nutcracker Suite" nke Tchaikovsky, na-atụ egwu ịpụ n'ọdụ ụgbọ mmiri n'oge ọ bụla, otu òtù nnọkọ nke mbụ na-aga n'aha Jack B. Nimble na Quicks, mana onye isi nke indie aha ya kwenyesiri ike onye na-emepụta ihe, bụ ọkachamara bụ Kim Fowley, na ndị nnọkọ ya nwere ike ime ya nke ọma. Na ha mere; ndị omekorita nke New Orleans bu Earl Palmer, ha na-arụ ọrụ dị egwu ma dị nso na mmụọ nke mbụ "March nke ndị agha na-eto eto" na ndokwa ahụ ghọrọ ihe ọkụkụ ọzọ maka ndị Emerson Lake na Palmer. N'ịbụ onye a tọhapụrụ na 1962, ọ bụ ihe ijuanya na obi ụtọ ikpeazụ nke oke ọhịa '50s rock revolution.
The Top 10 Oldies nke 1960
Profaịlụ: 'The Hollies'
Gịnị bụ "Frat Rock" Music?
Agha nke abụọ nke ndị agha Britain: Dave Clark ise
Paul Na-asọpụrụ na Ndị Raiders 'Egwuregwu Pop na 5 Songs
Kedu egwu Music Craze?
Kristal: Òtù Gris Tiest nke Ụwa
Oldies nke 1965
Ngwa 10 kachasị mma nke 60s
Ot'u esi eme otu isi nsogbu
Gwa anu anu gi na Spanish
Ụmụ nwanyị Artificial: Njedebe nke Ịbụ Nne?
Gịnị Bụ Akụkọ Mgbe Ochie?
Ezigbo Mmasị Banyere Laura Ingalls Wilder
Ụlọ akwụkwọ University nke Nicholls
Ihe a na-ejikarị aghara aghara: Mgbagwoju, Hụ, na Nta
Ihe Mere O Ji Dị Mkpa Iji Chekwa Obi Gị
Agụụ na-agụ m! G in i mere M Ji Kwesie Ike?
Ụkpụrụ ọdịnala na Ụkpụrụ Ezinụlọ na America
Kwesịrị iji ọgụgụ isi mee ihe nke Akwụkwọ Ọchịchị Ụlọ Akwụkwọ?
Esi egwu egwu egwuregwu 'Golf Bowl'
Otu esi echeghari Mkpụrụ Cubic na ụrọ Cubic
Bases de datos para encontrar con exito trabajo en Estados Unidos
Ihe Nlereanya nke KeyListener (Na Usoro Java)
12 Ajuju nke Dinosaur a na-ajụkarị
Jiri 'Los peces en el hụo'
Ọkọlọtọ Art: N'akụkụ Ike na Edge Nro
Mark Zuckerberg ọ bụ Democrat ma ọ bụ Republican?
Joseph Winters na Mgbapụ ọkụ
5 Atụmatụ nchedo na ịtọlite ​​ndị anwụrụ n'elu
Ndị Baptist oge ochie
Kedu Ihe Nchọpụta Nchọpụta Leak Na-eme?
Josh Turner Biography na Discography
Kedu Chebyshev n'adịghị?